အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: Yellowstone ဥယျာဉ်နဲ့ Morning Glory ရေပူစမ်း
အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Morning Glory လို့ အမည်ရပါတယ်။ တကယ်လဲ ရေပူစမ်းဟာ အဝကျယ်ကျယ် ပြန့်ကားနေပြီး အတွင်းဘက်မှာ ကျဉ်းမြောင်းသွားပုံက Morning Glory ပန်းတစ်ပွင့်နဲ့ ဆင်တူတာကြောင့် ဒီနာမည်ကို ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Morning Glory ပန်း
Morning Glory ရေပူစမ်း
Morning Glory ပန်းနဲ့ တူမတူ ဆိုတာကိုတော့ ပုံကိုကြည့်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ရေပူစမ်းရဲ့ အပေါ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတော့ အပူငွေ့များ ဖြာထွက်နေတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အချို့နေရာတွေမှာတော့ ရေကန်ရဲ့ အပူချိန်ဟာ ရေဆူမှတ်ထိအောင် ရှိနေတတ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ပူလွန်းတဲ့ မြေအောက်ရေထဲမှာတော့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင် ကျောက်ဆောင်များဆီက သတ္တုမျိုးစုံတို့ဟာ ပျော်ဝင်နေခဲ့ပါတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း စိမ်းပြာရောင် ရေညှိတွေ ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ ရေထဲမှာပါဝင်တဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေက ရေပူစမ်းရဲ့ အောက်ခြေအရောင်ကို ကတ္တီပါ စိမ်းပြာရောင်အဖြစ် မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သော အယ်လ်ဂျေးတွေဟာ အလွန်မြင့်မားသော အပူချိန်အတွင်းမှာတောင် အသက်ရှင်သန် နေထိုင်နိုင်ကြပါတယ်။ စိမ်းပြာရောင်ရှိတဲ့ ရေညှိတစ်မျိုးဟာဆိုရင် ၁၆၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အပူချိန်ထိ ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။
ထူးထူးဆန်းဆန်း အဝါရောင်၊ အညိုရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်ရှိတဲ့ ရေညှိတွေနဲ့ ရေထဲမှာပါဝင်တဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေက ရေကန်ရဲ့ အောက်ခြေအရောင်ကို စိမ်းပြာရောင်ကတ္တီပါ အဖြစ် မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သော အယ်လ်ဂျေးတွေဟာ အလွန်မြင့်မားသော အပူချိန်အတွင်းမှာတောင် အသက်ရှင်သန် နေထိုင်နိုင်ကြပါတယ်။ စိမ်းပြာရောင်ရှိတဲ့ ရေညှိတစ်မျိုးဟာဆိုရင် ၁၆၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အပူချိန်ထိ ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။
Morning Glory ရေပူစမ်းဟာ အချို့နေရာတွေမှာ ရေဆူမှတ်ထိအောင် ပူပြင်းသော်ပြီး အလွန်လှပတဲ့ စိမ်းပြာရောင်ရှိခဲ့သော်လည်း ဥယျာဉ်တွင်း အလည်လာရောက်ကြတဲ့ ဧည့်သည်များက ရေပူကန်အတွင်းသို့ အမှိုက်သရိုက်များ၊ အကြွေစေ့များ၊ တုတ်ချောင်းများ၊ ကျောက်ခဲများ ပစ်ချတဲ့အတွက် မြေပြင်အောက်မှ အပေါ်သို့ စီးထွက်လာသော ရေပူမှာလည်း နည်းပါးသွားခဲ့ပြီး ရေရဲ့အပူချိန်မှာ လျော့ကျခဲ့ရသလို၊ ရေပူစမ်းရဲ့အရောင်မှာလည်း ရွှေဝါရောင်သို့ ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ရေပူစမ်းအနီးကို သွားတဲ့ လမ်းပေါင်းများစွာကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပြီး သတ်မှတ်နေရာကနေသာ သွားနိုင်အောင် ဥယျာဉ်ရဲ့ တာဝန်ရှိသူများက ဆောင်ရွက်ထားကြပါတယ်။
ယခင်ကလည်း Yellowstone ဥယျာဉ်ကြီးအတွင်းက သစ်တောကြီးဟာ သုံးပုံတစ်ပုံခန့် မီးလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီလို လောင်ကျွမ်းတဲ့မီးဟာလည်း ဥယျာဉ်တွင်း လာရောက် လည်ပတ်သူများရဲ့ ပေါ့ဆမှုကြောင့် လောင်ကျွမ်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥယျာဉ်ကြီးအတွင်းမှာ တောင်တက်ခြင်း၊ စခန်းချခြင်း၊ ငါးမျှားခြင်း၊ လှေစီးခြင်း ၊ ရှုခင်းများ လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး တစ်နှစ်နှစ်ကို လာရောက်လည်ပတ်သူပေါင်း များစွာ ရှိပါတယ်။
ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ပေမဲ့ သဘာဝအတိုင်း လှပနေတဲ့ Morning Glory ရေပူစမ်းကို သဘောကျတာကြောင့် ပြန်လည်ဝေမျှခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ရှင်..
17 Responses to “Yellowstone ဥယျာဉ်နဲ့ Morning Glory ရေပူစမ်း”
ချော အရင်ရေးတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ရေပူစမ်းနဲ့ နှင်းခဲလုံးလေးများဖတ်ရတုန်းက ကိုယ်ကလည်း Yellowstone National Park ကုို သတိရပြီး အဲဒီအကြောင်းရေးချင်နေတာ။ ခုချောရေးတော့ ဖတ်ရတာ ပျော်တယ်။ ပြန်ရောက်သွားသလိုဘဲ။ ကုိုယ်အဲဒီ ရေပူစမ်းတွေ ကို အရောင်စုံတွေ့ ခဲ့ရတော့ အရမ်း အံ့သြပြီး ကုိုယ့်ရဲ့ အင်တာပရက်တာ ကို တရစပ်မေးခွန်းတွေ မေးခဲ့မိတယ်။ တချို့ spring တွေကပန်းထွက်နေတာလည်း အရမ်းလှတယ်။ ထပ်သွားချင်သေးတယ်။ ကျေးဇူး..ကျေးဇူး ချောရေ။ ဖတ်လို့ သိပ်ကောင်းပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ ချောရှာထားပေးတဲ့ အကြောင်းတွေရယ်..ပုံတွေရယ်ဘဲ တစ်ဝကြီးကြည့်သွားတယ်..
So beautiful Chaw, thank you so much for sharing!
ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်လေးတွေ ပြန်လည်ဖတ်ခွင့်ကြည့်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါချောရေ။
သဘာဝ အမွေတွေကို စူးစမ်းလိုတဲ့ လူတစ်ချို့ရဲ့ ဘေးရန်က ကာကွယ်နိုင်အောင် စနစ်တကျ
အခွင့်အခါကြုံရင် အလည်တစ်ခေါက်ရောက်ချင်တယ်း)
စိတ်ဝင်စားတယ် ချောရယ်၊ မသွားနိုင်သေးတော့လဲ ဗဟသုတပေါ့နော့ :)
မဆီမဆိုင် ကျိုင်းတုံက ရေပူစမ်းကို သတိရသွားတယ် အဟီးးးးး
ဘယ်သူများ morning glory ပန်း ထဲကို အလင်းတွေ လာထည့်ပေးခဲ့တာလဲကွယ်...။
ရှုခင်းတွေကလှလိုက်တာ အဲလိုနေရာမျိုးတွေအရမ်းရောက်ဖူးချင်တယ်။ တကယ့်သဘာဝအလှတွေပဲ။ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါညီမရေ..
အဲဒီသွားပျော်ပွဲစား ငါးမျှားလုပ်ချင်လိုက်တာ ပျော်စရာကြီး
ဟုတ်ပါရဲ့ ချောရေ၊ တကယ့်ကို Morning Gloryပန်းလေးအတိုင်းပဲ။ သဘာဝတရားရဲ့ အလှတွေက ဆန်းကြယ်တယ်၊ လူတွေ တန်ဘိုးထား စောင့်ရှောက်တတ်ဖို့ပဲ လိုတာ....
မမကြောင့်မမြင်ဖူးတာတွေ မြင်တွေ့ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးပါ ။
ဟုတ်တယ်။ morning glory ပန်းနဲ့တူတယ်နော်။ ဂျပန်မှာတော့ ရေပူစမ်းတွေမှာ hotel တွေဖွင့်ပြီး ရေချိုးကြ အပန်းဖြေကြတာ TV ထဲမှာ ကြည့်ဖူးတယ်။
ရေပူစမ်း တစ်ခါလောက်တော့ သွားကြည့်ချင်သား။
Morning Glory ထဲ ခုန်ချလိုက်လို့ကတော့ ပြုတ်ပြီးသား အသင့်စားပဲ။ ကြက်ဥလေး ဘဲဥလေး ပြုတ်စားလို့ရအောင် စီစဉ်ပေးမထားဘူးလား အစ်မချော။ ဟီး
Wow!! အံ့ချီးထိုက်ပါပေစွတကား။ မောနင်းဂလော်ရီပန်းလေးက သိပ်လှတာပဲနော်။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် မောနင်းဂလော်ရီပန်းက မောနင်းအချိန်ပဲ ပွင့်တာလား မသိ။ ကန်စွန်းပွင့်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပဲ သိလား ချော။ တစ်ချို့ပိုစတာတွေမှာ တမင်ဖန်တီးထားတယ်လို့ ထင်ရလောက်အောင် ထူးဆန်းနေပေမယ့် တကယ်လည်း ရှိနေကြတယ်နော်။ ရောက်ဖူးချင်လိုက်ပါဘိ။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေ ချော။
တော်တော်လေးကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ စေတနာပါပါရေးထားတာပဲဗျာ. ချီးကျူးပါတယ်.
Morning Glory ရေပူစမ်းကို ကျွန်တော်ခုမှ သိတယ်.
Yellowstone ဥယျာဉ်အကြောင်း ဟိုတစဒီတစ ကြားဖူးထားပေမယ့် အခုလို ပုံတွေအများကြီးနဲ့ မကြည့်ဖူး သေးဘူးဗျ၊ Morning Glory ကလည်း လှလိုက်တာ၊ ပုံတွေ အများကြီးနဲ့ ဝေဝေဆာဆာ ဖြစ်အောင် တင်ပြထားလို့ ကျေးဇူးပါပဲ မချောရေ...။
လှလိုက်တာ။ သွားလည်ချင်လိုက်တာ။ Morning Glory ရေပူစမ်းကလည်း တကယ့်ပန်းပွင့်နဲ့တူတယ်။